▷ Ny fantsom-panafody rano tsara indrindra | Ny trondro
Ny famafana rano dia zavatra tena ilaina hanadiovana ny rano izay avy hatrany amin'ny paompy. ary ataovy mety izany mba hahafahan'ny hazandranoo miaina ao aminy tsy misy tahotra ny klôro sy ireo singa hafa misy ao anaty rano famafazana izay manimba ny fahasalamana tokoa.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny vokatra famatsian-drano tsara indrindra, ankoatry ny milaza aminao hoe momba ny inona ny «conditioner», rehefa ilaina ny mampiasa azy sy ny fampiasana azy. Ho fanampin'izay, mamporisika anao izahay hamaky ity lahatsoratra hafa ity rano inona no hampiasaina ao amin'ny aquarium ho lasa tena manam-pahaizana.
1 Conditioners rano anaty rano tsara indrindra
2 Inona ny conditioner de aquarium ary inona no ilana azy?
3 Conditioners rano anaty rano tsara indrindra
3.1 Tena mitondra rano
3.2 Tetra Aqua Safe ho an'ny rano fantsakana
3.3 Conditioner amin'ny fampiasana maro
3.4 Fanadio Aquarium Rano
4 Rahoviana no ilaina ny mampiasa conditioner-drano anaty rano?
5 Ahoana ny fampiasana fantson-drano aquarium
6 Aiza no hividianana ranon-drano aquarium mora vidy kokoa
Conditioners rano anaty rano tsara indrindra
JBL mpanadio rano ...
Conditioner volo Seachem ...
Inona ny conditioner de aquarium ary inona no ilana azy?
Ny mpamono rano, araka ny anarany, dia a vokatra ahafahanao mitsabo rano amin'ny paompy izay manimba trondro amin'ny ankapobeny, ary atoro azy io hamadika azy io ho fonenana honenan'izy ireo.
Araka izany, ny etona misy rano dia kapoaka feno ranoka, rehefa atsipy anaty rano (mazava foana ny fanarahana ny torolalan'ny vokatra) tompon'andraikitra amin'ny famongorana ireo singa ireo, toy ny klôro na klôroamine, izay manimba ny trondroo.
Eo amin'ny tsena no hahitanao be ny conditioner-drano, na dia tsy mitovy kalitao na tsy mihetsika aza ny rehetra, noho izany zava-dehibe indrindra ny fisafidiananao vokatra izay manana kalitao avo indrindra (aorian'izay rehetra miresaka momba ny fahasalaman'ny hazandranoo). Nanomana safidy ho anao izahay miaraka amin'ny tsara indrindra:
Tena mitondra rano
Seachem dia marika tena tsara miaraka amin'ny iray amin'ireo mpikirakira rano feno indrindra eny an-tsena. Tsy manana intsony izy ary tsy latsaky ny efatra ny habe azonao isafidianana arakaraka ny habetsaky ny rano ao anaty aknarium (50 ml, 100 ml, 250 ml ary 2 l), na dia miparitaka be aza izy io, satria 5 ihany no azonao ampiasaina ml (satroka iray) ny vokatra isaky ny rano 200 litatra. Ny Seachem Conditioner dia manala ny klôro sy ny chramine ary manala ny amoniaka, ny nitrite ary ny nitrate. Ho fanampin'izay, afaka mampiasa fepetra samihafa ianao, arakaraka ny famantarana ny vokatra, hampifanaraka azy ireo amin'ny olan'ny rano. Ohatra, raha manana chloramine be dia be izy, dia azonao atao ny mampiasa fatra roa, raha ambany dia ambany dia ampy ny antsasaky ny fatra (manantitrantitra izahay fa mijery ireo famaritana ny vokatra alohan'ny hanaovana zavatra).
Tetra Aqua Safe ho an'ny rano fantsakana
Tena azo ampiharina ity vokatra ity, nanomboka mamela anao hanova ny rano fantsakana ho rano azo antoka ho an'ny trondroo. Ny fandidiana dia mitovy amin'ny an'ny vokatra hafa amin'ity karazana ity, satria tsy misy afa-tsy ny fandrarahana ny vokatra ao anaty rano (avy eo, amin'ny faritra iray hafa, dia hasehoko anao tsirairay ny fomba fanaovana azy). Na dia tsy dia manitatra toa an'i Seachem aza izy io, satria 5 ml isaky ny rano 10 litatra ny ampahany dia manana endrika mahaliana izy io izay miaro ny tsiranoka sy ny fonon'ny moka ao amin'ny trondroo. Ho fanampin'izany, dia misy fangaro vitamina izay mampihena ny fihenjanana ho an'ny biby fiompinao.
Conditioner amin'ny fampiasana maro
Conditioner volo malemy ...
Ny fantsom-panafody sasany, toa ity avy amin'ny Fluval ity, dia tsy natao hametrahana ny rano mandritra ny fiovan'ny rano fotsiny, fa koa azo ampiasaina ihany koa izy ireo mba hanomezana acclimatize trondro izay vao tonga tao amin'ny aquarium, ho an'ny fanovana rano ampahany na hitondrana ireo trondro mankany amin'ny aquarium hafa. Mora ampiasaina toy ny maodely hafa izy io, manaisotra ny chlore sy chloramine, mampihena ny metaly mavesatra izay mety misy ao anaty rano ary miaro ny vombon'ireo trondro. Ho fanampin'izany, ny raikipohy dia misy fangaro zava-maniry mampitony izay manampy amin'ny fihenan'ny fihenjanana.
Fanadio Aquarium Rano
Isan'ireo mpanadio na fantsom-panafody ho an'ny aquarium rano velona dia ahitantsika ity vokatra tsara ity, Biotopol, izay, miaraka amin'ny tahan'ny vokatra 10 ml isaky ny rano 40 litatra dia tompon'andraikitra amin'ny fanesorana klôro, chloramine, varahina, firaka ary zinc. Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny fanovana rano feno sy ampahany, ho fanampin'izany dia manatsara ny fiarovana ny trondro izay vao sitrana tamin'ny aretina iray izy, satria ao anatin'izany, toy ny vokatra hafa, ny fangaro vitamina izay manampy amin'ny fampihenana ny adin-tsaina.
Ity mpanadio rano ity dia tonga ao anaty tavoahangy antsasaky ny litatra ary azo ampiasaina amin'ny aquariums onenanan'ny trondro sy sokatra rano velona.
Ity mpikirakira rano tsotra ity, azo alaina amin'ny tavoahangy 250 ml, dia manao izay nampanantenainy: manisy rano famaohana izy ary manamboatra azy io ho an'ny trondroo amin'ny fanesorana klôlônia, klôroôma ary amoniaka. Tsotra ihany ny fiasan'izy ireo toy ny sasany, satria tsy mila manampy ny habetsaky ny vokatra ao anaty rano litatra voalaza fotsiny ianao. Azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny fanovana rano voalohany sy amin'ny ampahany, ary azo ampiasaina amin'ny aquariums onenan'ireo sokatra ihany koa.
Rahoviana no ilaina ny mampiasa conditioner-drano anaty rano?
Na dia azo antoka aza ny fisotroana rano amin'ny paompy sotroin'ny olona (na dia tsy matetika na aiza na aiza), ny isan'ireo entana tsy azo antoka ho an'ny trondro dia tsy manam-petra. From klôro, chloramines ka hatramin'ny metaly mavesatra toa ny firaka na ny zinc, ny rano fantsakana dia tsy tontolo azo antoka ho an'ny hazandrantsika. Noho izany, mieritreritra foana ny momba ny fahasalamanao ianao, zava-dehibe ny fampiasana fantson-drano hatramin'ny fotoana voalohany.
Mamela izany ny mpikirakira rano. Mba hanomezana ohatra iray dia avelan'izy ireo ho toy ny lamba maloto ny rano fantson-drano hipetrahan'ny hazandranoo soa aman-tsara. Avy eo, azonao atao aza ny mampiasa vokatra hafa manatsara ny biolojika (izany hoe, ohatra, miteraka bakteria "tsara") hanondraka ny rano ao anaty aquarium anao ary hanatsara ny kalitaon'ny fiainana ny hazandrano sy ny zavamaniry anao.
Farany, zava-dehibe ihany koa ny tsy hametrahanao ny fampiasan'ny fanafody amin'ny fanovana rano voalohany. Araho ny torolàlana momba ny vokatra, izay hilaza aminao ny fomba hampiasana azy, mazàna amin'ny fatra ambany, amin'ny fiovan'ny rano amin'ny ampahany, na koa amin'ny fipetrahana ireo trondro vao tonga, manatsara ny hery fiarovan'ny vatana aorian'ny aretina na mampihena ny adin-tsaina.
Ahoana ny fampiasana fantson-drano aquarium
Ny fanodinana rano famonoana ho an'ny aquarium dia tsy mora kokoa, na izany aza, mazàna dia miteraka fisalasalana vitsivitsy izay hoesorintsika.
voalohany, miasa ny tsimatiora amin'ny alàlan'ny fampidirana azy fotsiny amin'ny rano aquarium, na ho an'ny fanovana rano na ho an'ny fanovana ampahany (ohatra, rehefa avy nisoka ny ambany).
Ny iray amin'ireo fisalasalana fahita indrindra dia ny hoe azo ampiana ve ilay «conditioner» raha ao anaty aquarium ny trondro. Ny valiny dia hoe, amin'ny alàlan'ny fanafody faran'izay tsara indrindra dia azo atao izany, satria niely vetivety tamin'ny rano izy ireo. Na izany aza, mihetsika amin'ny fomba miadana kokoa ny hafa, noho izany dia tsara kokoa, ny maka antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra, izany atokana any anaty fitoeran-javatra misaraka ny hazandranoo rehefa ampiana «conditioner» ny rano.
Azonao atao ny mamerina ny hazandranoo anaty rano ao anatin'ny dimy ambin'ny folo minitra, ny faharetan'ny fotoana ilain'ireo mpikirakira miadana kokoa miely sy miasa manerana ny rano.
Amin'ny ankapobeny, ny mpamono rano dia azo antoka ho an'ny trondroo, saingy mety hahafaty azy ireo izany raha tsy mifikitra amin'ny famaritana ny vokatra ianao. Satria, zava-dehibe ny ifikiranao amin'ny famaritana ary aza asiana fatra fanampiny.
Farany, any amin'ny aquarium vaovao, na dia mitsabo ny rano amin'ny etona ianao dia tsy maintsy miandry iray volana vao manampy ny trondroo. Izany dia satria ny aquarium vaovao rehetra dia tsy maintsy mandalo dingana bisikileta alohan'ny hipetrahan'ny trondro.
Aiza no hividianana ranon-drano aquarium mora vidy kokoa
Afaka mahita ianao mpampita rano amin'ny toerana maro, indrindra any amin'ny magazay manokana. Ohatra:
En Amazon Tsy vitan'ny mpikirakira faran'izay tsara ianao, fa amin'ny vidiny tena hafa sy fiasa samihafa (faran'izay madio sy mafy, fanoherana adin-tsaina…). Ny zavatra tsara momba ity magazay mega ity dia, raha nanao fifanarahana tamin'ny safidy Prime ianao dia hanana izany ao an-trano ao anatin'ny fotoana fohy. Ho fanampin'izay, afaka tarihin'ny fanehoan-kevitra ianao hahafantatra hoe iza amin'ireo no mifanaraka aminao indrindra.
En fivarotana biby fiompy manokanaTahaka an'i Kiwoko na Trendenimal, dia hahita kondisionera marobe ihany koa ianao. Ho fanampin'izay, manana kinova ara-batana izy ireo, izay ahafahanao mandeha manokana ary manontany ireo fanontaniana mety hitranga.
Na dia tsy misy isalasalana aza fa ilay manana ny vidiny tsy azo resena dia ny Filankevitra supermarket Mercadona ary ny fitsaboana azy ho an'ny rano amin'ny paompy Dr. Wu, avy amin'ny marika Tetra. Na dia noho ny habeny aza dia amporisihina ho an'ny tanky sy tanky trondro kely izy fa tsy ho an'ireo amateurs izay efa manana tanky mitovy habe amin'ny farihy Titicaca, izay omena marika sy endrika hafa.
Ny fantsom-panafody rano anaty rano dia fototra iray mamela ny rano ho tontolo azo antoka ho an'ny hazandrantsika. Lazao aminay, inona no fitsaboana ampiasainao amin'ny rano? Misy marika manokana tianao ve sa mbola tsy nanandrana nampiasa conditioner?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Accessories » Conditioner rano anaty rano